JAARMIYAALEE SIYAASAA EESSA JIRU?
1. Waggaa darbe kana dhimmuma Oromoof walgahiin guddaan tokko waldoolee Seeraa Oromootiin biyya UK (Unite Kingdom) tti akka geggeeffame Oromoon hedduun quba qabna; guyyaa sanatti dhaabbolii siyaasaa kanneen akka ABO, ODF, KWO dabalatee dhaabolii siyaasaa Oromoo 9 tu as ba’ee uummatatti of beeksisee ture. Dhaabolee haaraa gaafas dhageenyellee qabna turre. Akkuma maatiitti shan jaha ta’anii kan as bahanillee turaniiru. Sababii guddaan dhaaboliin kun as ba’aniifimmoo Wayyaaneen kufaa jirti kan jedhurraa ka’amee tarii saamicha teessoo Paarlaamaatiif ta’uu hin oolu fakkaata. Sunis hawwii gaariidha; bilisummaan argamnaan Paarlaamaan keenya bal’aa waan ta’eef. Dhaaboliin siyaasaa Oromoo kun salgan har’a eessa jirtu?
2. Yeroo ammaa kana dhaabni namoonni hedduun ‘live video’ seenuun gadi ba’ee abaarus ta’e katabbiin hadheessu ABO(Akka isaan moggaasanitti Shanee) kan jedhamu kanadha. Sun maaliifi? Tarii waan inni qabatamaan hojiirra jiruufi? Waan Qeerroof Qarree akkuma danda’etti biyya keessaa ijaaree sirna sana dadhabsiisaa jiruufi? Moo maaliif warreen saddeettanii hafan sun abaaramuu dadhaban? KD
3. Dhaabbileen siyaasaa kunneen har’a dabbaloota ciccimoo, miseensota ciccimoo yeroo yerootti as bahanii cimina jaarmayaa keessanii nuuf himan maaf dhadbani? Meerre miidiyaarrattoo isin argaa hinjirruu? Miidiyaatu isin didee? Yoo ta’es maaf baatanii sabatti rakkoo kana hin himanne?
4. Dhaabileen baayyeen maqaan gargar ta’anii Alaabaa garuu tokkuma yerootti fayydamantu argama. Keessumattuu Alaabaa ABO jaarmiyaalee ODF dabalatee kan Maqaa ABO biraan dhaabates sanuma gargaarama? Sun maaliifi jamaa? Garaagarummaan Alaabaas ammoo numa jira; fakkeenyaaf KWO n kan biraa qaba; sun maaf ta’e? Isin obbolootuma mitii? Maaliif waliigaltee guddaan isin gidduudhaa dhibe?
5. Jaarmiyaaleen Siyaasaa Wayyaaneen sodaataa jirtu kun teessoodhaan biyyaan ala akka jiru ifa. Silaa biyya abbaa ofiira jiraatanii maqaa paartii Oromoo hedduun ijaaramanii as ba’uun numa danda’ama ture. Ala kanatti garuu akkas baayyachuun hagam bu’aa qaba?
LALLAAFINNIIFI QAWWAAN ISIN NUTTI MULDHISTAN MAAL NUTTI FIDE?
1. Aktvistoonni hedduun kan as bahanii nukijibaa jiran kunneen iddoollee jaarmiyaan siyaasaa tokko hojjechuu qabu qabatanii oofuu eegalan. Mootummaa akkasiifi akkanaarraa malattoo cisiisnee jedhan; asiisi achitti walgahii waamanii dhaaba haaraallee nurratti ijaaruudhaaf garee garee qabatani, sabas burjaajessani; ganamaa galgala beeksifniifi waci miidiyaas isuma qofa ta’e; chaarterris (Seeraafi heera) katabame; sunis mormame….mataa dhukkubbii hedduu….
2. Wayyaaneenis qawaa sana argattee keessa galuun namootashee biyya alaa kanatti ergitee Oromoo waldhabsiifte. Irra caalaattuu erga tokkoomne jedhameen booda gara diiggaatti ceene. Ajjeechaafi hidhaanis itti fufe. Jaarmiyoota karaa nagaa biyya keessa socho’aa jiranillee hundaa dhabamsiifte; kaan hidhaan kaanis ni ajjeefte. OPDO’ kan lubbuun keessaa ba’ellee Lammaa Magarsaa afaan bareedaa tokkoon as ba’ee lubbuu itti deebise.
GAAFFII CIMAAN Aniifi Oromoon Marti ISINIIF QABNU:
1. Kan dhiigni Ilmaan Oromoo Irrecha bara darbeerratti jige; barataafi barattuun Oromoo karaarratti rasaasaan waadamte?; Hayyoonni mana hidhaa wayyaaneetti guuraman? Qotee bulaan manasaarratti salphatee qe’eesaa diige hundi walitti isin hinfinnee maaltu walitti isin fidaa?
2. Kaayyoon keessan guddichi Abbaa Biyyummaa Oromoo mirkaneessuudha taanaan maalirratti waldhabduu? Dantaan biraa Oromoorra barbaaddan yookaan Oromoonis isinirraa barbaadu maaltu jira? Muudamni Bilisummaa booda dhufu Oromoo hundarra darbee Afriikaafuu hinga’uu? Maal dhabne?
3. Yoo walitti dhutaniillee tokko ta’uu dadhabdan akka waliin dalagaa jirtan maaliif as baatanii foddaa miidiyaa dura teessanii nutti hin himtani? Walii walii keessan barbaaduu dhiistanii maaliif dhaqxanii halagaa faana hariiroo uumtu? Utuu jabaattanii isin duuba uummata Miliyoona 50 oltu jira mitii? Nuti warra Habashaa kadhtan turree?
GAAFFIIN UUMMATA OROMOOF QABU?
1. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kana keessa dhibee jiru akkamiin hiikuu dadhabne? Jarri kun harka keenya keessa hinjirani? Kan gargaaru isin miti?
2. Jaarmiyaa dhugaatti sabaaf hojjetaa jiruufi waraanas qabu adda baafannee maaliif hingargaarru? Maaliif gumaachi keenya qabatamatti bu’aa buusuusaa hordofnee hinmirkaneeffannu?
3. Hayyoonni ciccimoon ala kana keessaa Yunivarsiitiifi Kolleejjota keessa dalagan, kan hojii dhuunfaasaaniirra jiran marti maaliif dhaabbilee kaan utubuufi beekumsa keessaniillee gadi baatanii furama fiduu irraa qoollifattu? Isin Oromoodhuma keessaa dhalattani miti? Kan diinni fixaafi salphisaa jiru kun dhiiguma keessan mitii?
GAAFFILEE AKTIVISTOOTA OROMOOF:
1. Isin akka aktvistii Oromootti gahee keessan ba’aa jirtumoo loogii jaarmiyaa siyaasa gidduutti uumaa jirtu? Takka takka maaliif hojii Jaarmiyaan siyaasaa dalaguu qabu dalaguutti fiigdu? Maaliif iddoo hundumaatti of agarsiisuudhaaf miidiyaa hunda to’attanii warreen hojii Jaarmiyaa siyaasaarra jiran awwaaluu barbaaddu?
2. Qarqara nannaa’uusaarrammoo isinis maqaa jaarmiyaa tokkoo uummattanii ifatti labsachuun maaliif itti hinfufne?
MIIDIYAA WALABAA OROMOOF(Yoo Qabaanneef jechuukooti..)
1. Jaarmiyaalee Oromoo dhugaan jiraniifi maqaan jiran maaf miidyaatti waamuun urguftanii nutti hin agarsiiftani? Maaliif tokko loogdanii tokko olkaastu? Maaliif waltajjii tokkorratti waamtanii wal falmisiisftanii Oromoodhaaf qabatamatti kan hojjetan ifa nuuf hingootani?
2. Miidiyaalee Show’n garaagaraa maaliif miidiyaawwan jiran hunda dabalattanii kanarratti hindalagne? Himaammanni haqa Oromoo kanarratti akka isin hindalagne godhu jiraa? Biyya bilisaa kana keessatti waan barbaadame hunda qeequun qaqqajeelchuun hindanda’amuu?
Taajjabbiin Itti fufa
Beekan Gulummaa Irranaa, Caamsaa 2017